Sazy ara-toekarena : nahoana i Thaïlandy no tsy voakitika? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2019 5:16 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2015)
Hetsipanoheran'ireo “lobaka mena” teo amin'ny fihaonan-dàlana Ratchaprasong, nalaina tao amin'ny Wikipedia CC-BY-20
Lavabe ny lisitra misy ireo firenena iharan'ny sazy ara-toekarena napetrak'i Frantsa sy ny Fiombonambe Eoropeàna, na dia i Rosia; Iràna ary Yemena aza no tena heno indrindra, mbola betsaka noho ireo ny firenena lasibatry ny sazy ara-toekarena ary miparitaka amin'ireo tanibe dimy. Bielorosia, Birmania, Korea Avaratra, ny fitondrana toniziàna teo aloha, i Zimbaboe… tsy mitsahatra ny miha-matevina ilay lisitra taorian'ny nitsaharan'ny Ady Mangatsiaka, rehefa injay “ireo fepetra faneriterena” no nanjary fitaovana nolalaina mba hahazoana ny fileferana poltikan'ireo firenena kendrena. Hafahafa, i Thailandy, firenena iray ambany fifehezan'ny tafika ary manao izay hamotehana ireo fahalalahana fototra rehetra, dia tsy mbola voakitika amin'io felaka mandrivorivo ara-toekarena io.
Fitaovana iray “tena ilaina” ao anatin'ny politika iraisampirenena ampiharin'ny Fiombonambe eoropeana ny fanasaziana ara-toekarena, fitaovana tsy maintsy ampiasaina ho fiarovana fa tsy fanasaziana. Izay midika fa ny tanjon'izy ireny dia tokony ampiarahana, na anomezana vàhana mihitsy aza, ny tetezamita pôlitika, indrindra fa any amin'ireo firenena izay tsy hanajàna ny zon'olombelona. Etsy ankilany anefa, ireo sazy ara-toekarena tsy tokony mihitsy hanafay ny toekaren'ireo firenena kinendry, hamoritra ny fiarahamonina manontolo na handray anjara amin'ny fanimbàna ny faripiainan'ny vahoaka .
Izany no antony, araka ny fampahatsiahivan'i Bastien Nivet, mpikaroka miaraka miasa amin'ny Ivontoerana momba ny Fifandraisana Iraisampirenena sy Stratejika (IRIS), nampivoaran'ny Fiombonambe Eoropeàna ny fepetrany mba hametrahana famaizana “manavaka” misimisy kokoa, ikendrena ireo sangany, ireo mpitarika, ny sasantsasany amin'ireo mpisehatra fototra amin'ny toekaren'ny firenena tsirairay avy, nefa koa miaro ny vahoaka (farafaharatsiny an-taratasy ihany aloha ). Marihan'ilay mpikaroka ihany koa fa ireo famaizana ataon'ny eoropeàna dia mazàna no hita ho henjana be miohatra amin'ny an-dry zareo Amerikàna na ny ONU, indrindra fa ao Iràna, ka nahafahana nampihena betsaka tokoa ny fiantraikan'izy ireny tamin'io firenena io.
Kanefa, raha toa ireny famaizana ara-toekarena ireny ka afaka ny hahomby tsara mba hisorohana ny fahasimbàn'ireo toedraharahan stratejika, ireo krizy, ireo politika mahery setra na ireo fitondrantena tsaraina ho mivaona, nahoana hatreto no tsy nisy mihitsy fepetra fanerena nampiharina tamin'ilay fitondrà-miaramila izay manao ampihimamba ny fahefana ao Thailandy efa ho taona iray mahery izao ?
Tsy hoe ny antony anefa no tsy misy. Hatramin'ny May 2014, ny tafika no mifehy an'i Thailandy rehefa avy nanongana ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra, izay voafidy tamin'ny fomba demaokratika anefa. Tohanan'ireo mpanambola ao Bangkok, tsy iasàn'ireo miaramila saina izay zo / lalàna ao an-toerana sy iraisampirenena izany ary politika iray mamono ny fahalalahana no ampihariny amin'ireo rehetra mpanohitra ny fitondram-panjaka na ny hetsika ataon'ny tafika. Hatramin'ny nisian'ilay fanonganam-panjakana, nosivanina ireo fahitalavitra, nofehezina ny vavan'ireo mpanao gazety, ary ireo mbola sahy mandefa fanakianana dia mety hofongorina tsotra izao. Tao anatin'ny volana iray monja, olona roa no hita faty tany anaty trano nihazonana azy ireo. Isan'ireny ilay ‘astrôlôgy’ mamiratra Suriyan Sucharitpolwong, nampangaina ho naniratsira ny mpanjaka.
Tsy izy irery. Niaraka tamin'ny fiverenan'ny lalàna miaramila sy ny tafika teo amin'ny fitondrana, niakatra be tsy mbola nisy toa izany ny isan'ireo fanenjehana olona ho naniratsira ny mpanjaka tao Thailandy. Araka ny lazain'ny Federasiôna Iraisampirenena momba ny Zon'Olombelona, tranga dimy monja no voatatitra momba ny resaka faniratsirana ny mpanjaka talohan'ilay fanonganam-panjakàna, ary efa ho dimampolo izany amin'izao fotoana izao. « Ao anatin'io rivopiainana io, ny polisy, ny mpampanoa lalàna, ny tribonaly ary ireo mpiasambahoaka rehetra dia toa samy matahotra avokoa raha tsy hanisy tohiny an'ireo fiampangàna ho naniratsira ny mpanjaka, noho ny fanahiana ho ampangaina hoe mitsipaka ny ftitondràm-panjaka », hoy ny fanazavan'i Brad Adams, avy amin'ny fikambanana Human Rights Watch.
Kanefa, na eo aza ireny fanitsakitsahana mibaribary ny zon'olombelona ireny, tsy mbolamanapaka hevitra foana i Frantsa sy ny Fiombonambe Eoropeàna hanafay ny ftiondràna ao Thailandy. Ny mifanohitra amin'izany aza, tao anaty taratasim-pifandraisana iray nivoaka tamin'ny Oktobra, nidehadehaka momba ny firoboroboan'ny fifandraisana ara-barotra ao amin'ny firenena roa tonta ilay ambasadaoro frantsay ao Thailandy. Araka io antontankevitra io, lazain'i Frantsa fa nitombo 27,6 % ny hadirin'ny fanondranana entana nataony nandritra ny taona, ary 12,5% ny fanafarana. Na misy aza ny sivana, ny fampidirana am-ponja sy ireo ahiahy be momba ny famonoana, mitohy ny ‘afera’. Ary dia mitohy tsara tokoa !
Firenena mijaly anefa i Thailandy, ary tsy azon'ny Fiombonambe Eoropeàna ny tsy hanao afa-tsy ny haneho hevitra fotsiny momba ireo zavamisy mahatsairavina mitranga ao. Ny mifanohitra amin'izany aza, fa tokony izy mampiasa ny toerana sy ny lanja ananany mba hampilefitra ny politika ao amin'ilay firenena ka hitarika azy ho any amin'ny demaokrasia. Ka tsy izany indrindra ve moa no tanjona narantiranty momba ireo famaizana ara-toekarena ampihariny amin'ireo firenena marobe erantany ? Tsy hoe satria mandeha tsara ny ‘afera’ dia ho afaka ny hitohy ny tsy firaharahiana manoloana ireo vahoaka ataon'ny tafika takalonaina. Mila manao hetsika maika i Frantsa sy ny Fiombonambe Eoropeàna ka mirotsaka sy mandray ny andraikiny manoloana io toedraharaha io, raha tsy izany dia ho ampangaina ho mpiray tsikombakomba amin'ireo mpamoritra.
Lahatsoratra nosoratan'i Raphael Plantier.